သွားနှင့် ခံတွင်း ဆိုင်ရာ သင့်ကို သိစေလိုသော အချက်များ – eazycorner
3/357, Thiri st, East Dagon
Traning, Sales and Services
သွားနှင့် ခံတွင်း ဆိုင်ရာ သင့်ကို သိစေလိုသော အချက်များ
သွားနဲ့ခံတွင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သွားဆရာဝန်တွေက သင့်ကို သိစေလိုတဲ့ အချက်တွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
၁) လူတွေက သင့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတွေ့တဲ့အခါ အရင်ဆုံး သူတို့ သတိထား မိတာက သင်ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အနေနဲ့ သတိထား မိတာက သင့်သွား တွေပါပဲ။ တတိယ အနေနဲ့ကျမှ သင့်ဆံပင်တွေကို သတိပြုမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက သွားတွေထက် ဆံပင်အတွက် ပိုပြီး ငွေကုန် ကြေးကျခံကာ ပြုပြင် နေကြပါတယ်။
၂) သွားဆေးခန်းကို လာတဲ့ လူနာတွေက နာမည်ကျော် သူတွေရဲ့ ပုံတွေကို ယူဆောင်လာပြီး “ကျွန်မရဲ့ သွားတွေကို သူ့လို ပုံစံမျိုး ဖြစ်ချင်ပါတယ်” လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော် ပြန်ရှင်းပြ ချင်တဲ့ အချက် ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီလို အပြုံးမျိုးတော့ ပြုံးနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလို သွားတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ အဆင်ပြေတဲ့ မျက်နှာ ပုံစံမျိုး သင့်မှာ မရှိတာကြောင့် ပါပဲ။
၃) သင့်အနေနဲ့ သင့်ခံတွင်းထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ လျှော့ချ လိုတယ်ဆိုရင် Xylitol (ပီကေထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ သကြား အစားထိုး ပစ္စည်း) ကို စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ Xylitol က သင့်ခံတွင်းရဲ့ ဓာတ်သဘာဝကို ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်ပါတယ်။ Xylitol ပါတဲ့ ပီကေ ခြောက်ခု၊ ခုနစ်ခုလောက် နေ့စဉ်စားရင် သွားပိုးစား ရောဂါ ကင်းဝေး စေပါတယ်။
၄) ခံတွင်းကို အပေါက် ဖောက်ပြီး အလှဆင်တာက ကူးစက်ပိုး ဝင်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ လျှာကို အပေါက်ဖောက် ပြီး အလှဆင်တာကြောင့် ပိုးဝင်ကာ လျှာဖြတ်လိုက်ရတဲ့ သူတွေကို ကြုံဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီလို မဖြစ်ဘူး ဆိုရင်တောင် လျှာကို အပေါက် ဖောက်တာ ကြောင့် ရှေ့သွားတွေ ပဲ့ထွက် တာမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
၅) လူတွေက ခက်ခဲ ကြန့်ကြာတဲ့ ကိစ္စမျိုးဆိုရင် သွားနုတ်ရသလိုပဲလို့ တင်စားပြောဆို တတ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းက သွားနုတ်ရတာက လွယ်ကူ မြန်ဆန်ပါတယ်။
၆) သွားဆေးခန်းကို မလာခင် ကြက်သွန်ဖြူတွေ စားမလာခဲ့ရင် ကျေးဇူးတင် နေမှာပါ။
၇)လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်တုန်းက ကလေးတွေက နို့ဘူးစို့ပြီး အိပ်ရင် သွားပျက်စီး နိုင်တယ်လို့ သွားဆရာဝန်တွေက မိဘတွေကို သတိပေးခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နို့ဘူးစို့ရက်နဲ့ ကလေးကို မအိပ်စေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီသဘောတရားက အခုအထိလည်း ပြောင်းလဲမှု မရှိပါဘူး။
၈) သွားဖုံးတွေကနေ သွေးထွက်တဲ့အခါ သင်တို့အနေနဲ့ ဘာမှ ကိစ္စမရှိပါဘူး လို့ပဲ ထင်နေကြပါတယ်။ သွားကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း မတိုက်ဘဲနဲ့ သွားဖုံးကနေ သွေးတွေ ထွက်နေရင် ဒါက သွားပတ်မြှေး ရောဂါ (Periodontal Disease) ဖြစ်နေ နိုင်တာကြောင့် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့် ပါတယ်။
By phage phage December 23, 2021 HEALTH, knowledgeLeaveaComment on သွားနှင့် ခံတွင်း ဆိုင်ရာ သင့်ကို သိစေလိုသော အချက်များ
အကောင်းဆုံး wifi router ကို ဘယ်လိုရွေးချယ် ဝယ်ယူမလဲ?
မိခင်တို့၏ နုပျိုအောင် နေထိုင်နည်းများ
အိပ်မောကျချိန်မှာ ဟောက်တာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပါ
How to download Photoshop CS6(32bit and 64bit) free with easiest way
တစ်မိနစ်အတွင်း လက်ဖဝါးတွေ နူးညံ့အောင်ပြုလုပ်နည်း
အချိုကြိုက်သူ အအေးကြိုက်သူ ရောဂါထူ
BIOS အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကိုလက်စထရော ကျစေသည့် အစားအစာများ
Copyright © 2015-21. Eazycorner All rights reserved. Theme Easy Magazine by Creativ Themes